11 fararano 2020 - Vaovao manome valisoa - The Reward Foundation
Home Tsia. 11 Autumn 2020
Miarahaba! Rehefa milay mangatsiaka ny andro dia manana vaovao lehibe ato amin'ity gazety ity izahay miaraka amina zavatra mahafinaritra hanafana ny fonao, ary koa ireo maizina hanentana anao hanao asa bebe kokoa. Naka ny sary etsy ambony izahay tamin'ny dia niasa tany Irlandy tamin'ny fararano lasa teo. Mahatsiaro ny raozy malaza an'i Tralee izy io. Tongasoa eto amin'i Mary Sharpe ny hevitra rehetra mary@rewardfoundation.org.
Fandefasana drafitra fampianarana 7 maimaimpoana
Vaovao lehibe! Ny Reward Foundation dia faly nanambara ny fanombohana ny drafi-pampianarana 7 fotony momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny sexting ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa, maimaimpoana. Misy fanontana UK, Amerikanina ary iraisam-pirenena misy. Ny lesona dia mifanaraka amin'ny torolalan'ny governemanta (UK sy Scottish) momba ny fifandraisana sy ny fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy ary efa vonona hizara. Ny fomba fanaontsika tokana dia mifantoka amin'ny ati-dohan'ny tanora. Ny Foundation Reward dia neken'ny Royal College of General Practitioners nandritra ny taona faha-4 ho mpanome tolotra ekena momba ny 'pôrnôgrafia sy ny firaisana ara-nofo'.
Nahoana izy ireo no ilaina?
Fa maninona no afaka izy ireo?
Voalohany indrindra, ny fihenan'ny sehatry ny daholobe nandritra ny folo taona lasa dia midika fa kely dia kely ny vola ananan'ny sekoly amin'ny lesona fanampiny. Faharoa, ny fanemorana tsy nampoizina tamin'ny fampiharana ny lalàna fanamarinana taona (jereo ny tantara etsy ambany) izay hisorohana ny fahatafintohinana ankizy kely amin'ny fitaovan'ny olon-dehibe, dia nitarika ho amin'ny fitomboan'ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ny pôrnôgrafia maimaim-poana, mivantana, hardcore mandritra ny areti-mandringana. Amin'izany fomba izany ireo izay tena mila fanampiana dia afaka miditra amin'ny fitaovana tsy miankina miorina amin'ny fikarohana siantifika farany.
Ampianaro izahay hampiely ny momba ireo lesona. Raha te hanampy anay amin'ny iraka ataonao amin'ny fanomezana ianao dia hisy bokotra Donate vaovao tsy ho ela. Jereo ny lesona Eto. Topazo maso koa ny an'ny anay bilaogy amin'izy ireo ho fampidirana haingana.
Ity misy sary manaitaitra mahafinaritra Video antsoina hoe, "Inona no atao hoe fitiavana?" ho fampahatsiahivana ny zavatra jerentsika ary ny maha-zava-dehibe ny zavatra kely. Tsy tokony hadinontsika io tanjona io ary hifantoka fotsiny amin'ireo loza mety hitranga manodidina ny fampiasana sary vetaveta. Zava-dehibe koa ny fitaizana fitiavana.
Ilaina amin'ny fahasalamantsika ny mikasika ny fitiavana satria mahatonga antsika hahatsapa ho voaro, voakarakara ary tsy dia misy dikany izany nanindry. Oviana ianao no nokasihina farany? Mba hahitana bebe kokoa dia nanao fanadihadiana ny BBC Ny fitsapana mikasika amin'io heviny be fikarohana io. Teo anelanelan'ny volana Janoary sy Martsa tamin'ity taona ity ny fanadihadiana. Saika olona 44,000 no nandray anjara tamin'ny firenena 112 samihafa. Misy andiana programa sy lahatsoratra momba ny valin'ny fanadihadiana. Ireto ny hevi-dehibe ho antsika avy amin'ny zavatra vitsivitsy navoaka:
Ireo teny telo mahazatra indrindra taloha mamaritra ny mikasika dia: "mampionona", "mafana" ary "fitiavana". Mahagaga fa ny "mampionona" sy "mafana" dia iray amin'ireo teny telo fahita indrindra fampiasan'ny olona isaky ny faritra eran'izao tontolo izao.
Mihoatra ny antsasaky ny olona no mieritreritra fa tsy manana mikasika ampy amin'ny fiainany. Tamin'ny fanadihadiana dia 54% ny olona no nilaza fa tsy dia nifandray loatra tamin'ny fiainany ary 3% ihany no nilaza fa nanana be loatra.
Ny olona mankafy ny fifandraisan'ny samy olona dia mazàna manana fiadanam-po avo kokoa sy ambany kokoa amin'ny fanirery. Betsaka ny fandalinana teo aloha no nanaporofo koa fa ny mikasika ny fifanarahana dia tsara ho antsika ara-batana sy ara-tsaina.
Mampiasa karazana kofehy hozatra mamantatra karazan-kasika isan-karazany.
“Ny fibra hozatra haingana dia mamaly rehefa voatsindrona na voatsatoka ny hoditsika, mampita hafatra any amin'ny faritra iray amin'ny atidoha antsoina hoe somatosensory cortex. Saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny profesora mpandinika ny siansa, Francis McGlone, dia nandalina karazana fibre nerveux hafa (fantatra amin'ny hoe fibre C aferent) izay mitondra fampahalalana manodidina ny dimampolo ambin'ny hafainganam-pandehan'ilay karazany hafa. Mampita ny vaovao amin'ny faritra hafa amin'ny ati-doha antsoina hoe kortula insula izy ireo - faritra iray izay manodina ny tsiro sy ny fihetsem-po koa. Ka maninona no ity rafitra miadana ity no nivoatra ary koa ilay haingana? Francis McGlone dia mino fa misy kofehy miadana mba hampiroborobo ny fifamatorana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fikolokoloana ny hoditra. "
Mifanohitra amin'izany kosa, ny karazana firaisana ara-nofo mampidi-doza kokoa dia eo amin'ny fitomboan'ny tanora. Io no navoakan'ny indostrian'ny pôrnôgrafia sy ny pundits azy ho 'filala an'habakabaka' na 'filalaovana fofonaina' ka milamina sy mahafinaritra ny feony. Io dia tsy. Ny tena anarany dia ny fanakendaana tsy mahafaty.
Dr Bichard dia klinika iray ao amin'ny North Wales Brain Injury Service. Niresaka momba ny “karazana ratra ateraky ny fikolokoloana tsy mahafaty izay mety misy ny aretim-po, ny lalan-dra, ny tsy fiterahana, ny tsy fanjarian-tsoa, ​​ny aretin-kabary, ny fikorontanana, ny paralysisa ary ny karazana ratra amin'ny ati-doha maharitra ela.” Jereo ny bilaogy eo amboniny.
Konferansa virtoaly fanamarinana taona Jona 2020
Raha te hahafantatra ny fomba ahafahanay mampihena ny fahazoan'ny ankizy sary vetaveta manome endrika herisetra ara-nofo ianao dia mety ho liana amin'izany ianao. Ny Reward Foundation dia nandany ny fahavaratra niara-niasa tamin'i John Carr, OBE, sekretera ny Fiaraha-miasa ho an'ny ankizy ho an'ny UK momba ny fiarovana amin'ny Internet mba hamokarana ny fihaonambe virtoaly fanamarinana Age momba ny pôrnôgrafia. Nitranga nandritra ny telo andro sy tapany tamin'ny volana Jona 3 izany ary nahitana mpandray anjara 2020 avy amin'ny firenena 160. Mpisolovava amin'ny fifanampiana zaza, mpisolovava, manam-pahaizana, tompon'andraikitra amin'ny governemanta, neurosains sy orinasa teknolojia nanatrika izany. Jereo ny bilaogy eo amboniny. Ity ny tatitra farany avy amin'ny kaonferansa.
Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaim-poana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet
Izahay dia manavao ny torolàlana ho an'ny ray aman-dreny amin'ny fotoana tsy tapaka raha misy vaovao tokony ampidirina. Feno torohevitra, horonan-tsary ary loharanom-pahalalana hafa hanampiana ny ray aman-dreny hahatakatra ny antony mahatonga ny pôrnôgrafia ankehitriny tsy mitovy amin'ny pôrnôgrafia taloha ary noho izany dia mitaky hafa manatona. Misy tranokala sy boky, ohatra, hanampiana ny ray aman-dreny hiresaka an-janany sarotra.
“Izahay no manao miverimberina”